မာရှယ်အီလက်ထရွန်နစ် IBC 380 အတွက် CV2018-CS Compact UHD ကင်မရာအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် IBC 380 များအတွက်နယူး CV2018-CS ကို Compact UHD ကင်မရာကြေညာ
TORRANCE,, CA, ဇူလိုငျ 31, 2018 - မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် ၎င်း၏အသစ်က Ultra-high-definition (UHD) ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကင်မရာ, မာရှယ်နှင့်အတူ၎င်း၏သေးသေးလေးနဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကင်မရာကိုပူဇော်သက္ကာဖြည့်စွက်နေသည် CV380-CS, IBC 2018 (Booth မှာ premiere တံ့သော #12.D20) ။ အဆိုပါ CV380-CS / 8.5G / 1G အတွက်အသေးစိတ်ကဗီဒီယိုရုပ်ပုံများ, နှင့်အကျိုးရလဒ်များကိုဖမ်းယူဖို့ 2.5-megapixel,6/3လက်မအရွယ် sensor ကိုအသုံးပြုသည်HD-SDI နှင့် HDMI 1.4 ။
"နောက်ထပ်တစ်တတ်နိုင်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း UHD ကင်မရာဖြင့်ထုတ်လွှပိုပြီးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူ AV စနစ် application များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာလက်လှမ်းမမီချဲ့ထွင်," Todd Musgraves, မာရှယ်မှာကင်မရာများကို၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "6G-SDI အတူနဲ့ HDMI အကျိုးရလဒ်များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် CS တောင်ပေါ်မှာမှန်ဘီလူးရွေးချယ်စရာ, ဒီကင်မရာအသစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများ ပို. ပင်ဘက်စုံပေးပါသည်။ "
အဆိုပါ CV380-CS သေးငယ်သေးသေးလေးကင်မရာဆွဲဆောင်မှုထောင့်နှင့်အရှုထောငျ့အဘို့အထူးခြားသောနေရာများသို့ fit နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာမဆို Point-of-အမြင် (POV) ကင်မရာ application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ CV380-CS တစ် varifocal သို့မဟုတ် fixed CS A / C မှန်ဘီလူး DC ကအော်တို-Iris ကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ mount နှင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်ကြိုက်များအတွက်လဲလှယ်မှန်ဘီလူးတစ်ခုအကွာအဝေးကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ CV380-CS တစ်ဦးအပြည့်အဝပြန်လည်ဒီဇိုင်းခန္ဓာကိုယ်စတိုင်နှင့်ပုံစံအချက်အသုံးချဖို့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်သေးသေးလေးကင်မရာမာရှယ်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်မျိုးဆက်မှပထမဦးဆုံးဖြည့်စွက်ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းစဉ်အတွင်းနောက်ဘက် connectors ပိုမိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဒီဇိုင်း 'အတောင်ပံ' 'သစ်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူလယ်ပြင်၌ကြာရှည်ခံမှုမြှင့်တင်ရန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CV380-CS အောက်ပါဘောင်မှုနှုန်းချိန်ညှိမှုများနှင့်အတူသုံး resolution ကို Modes သာကမ်းလှမ်း:
3840, 2160 နှင့် 25 fps နဲ့ * UHD (29.97x24p)
* တိုးတက်သော HD 1080, 720, 50, 59.94 နှင့် 25 fps နဲ့ (29.97p နှင့် 24p)
* လှပစွာ HD 1080, 50 နှင့် 59.94 fps နဲ့ (60i)
အဆိုပါ CV380-CS အဖြူချိန်ခွင်လျှာ, gamma, အမြတ်, အောက်ခံနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် zoom ကိုအပါအဝင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ပုံ setting များကိုတပ်ဆင်ထားခြင်း, အဝေးမှလိုက်ဖက်နှင့် RS485 (Visca) ကိုသုံးပြီးချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ CV380-CS ထုတ်လွှင့်အတွက်အသုံးပြုခြင်းကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစား, အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်ပညာရေး, ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေး, တင်ပြချက်များနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် Pro ကို AV စနစ် application များအတွက်ပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CV380-CS IBC 2018, အမ်စတာဒမ်အတွက်စက်တင်ဘာ 14-18, Booth မှာဖွယ်ရှိ #12.D20 ။
30 နှစ်ကျော်အဘို့, မာရှယ်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဗီဒီယိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီ, အသံများနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသံလွှင့်ဗီဒီယို, Pro ကို A / V ကို, Pro ကိုအသံနဲ့ OEM application များအတွက်စနစ်များကို။ မာရှယ်အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရစှနျ့မပါဘဲအလှနျတနျဖိုးမှာမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ conferencing, format နဲ့ converters အဖြစ်, ဆန်းသစ် POV နှင့် PTZ ကင်မရာများနှင့်အတူ Pro ကို A / V ကိုစျေးကွက်ထောက်ပံ့ထံအပ်နှံသည်။ မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်, Inc ကိုအမေရိကန်, တရုတ်, ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့်ရုရှားအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.marshall-usa.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ dpagan ဆက်သွယ်ရေး IBC မာရှယ် လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-07-31
ယခင်: IBC2018 မှာ InSync နည်းပညာ
နောက်တစ်ခု: CueScript Management Console IBC 2018 မှာစတင်ရန်မှ